Daawo Ra’isul Wasaare ku xigeenka Dalka oo shir muhiim la qaatay Howlgalka ATLANTA ee micowga yurub – Daily Som
Daawo Ra’isul Wasaare ku xigeenka Dalka oo shir muhiim la qaatay Howlgalka ATLANTA ee micowga yurub
By Staff on May 9, 2018 No Comment
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta kula kulmaywafdi ka socda Midowga yurub markab ay leeyihiin ciidamada Talyaaniga ee qaybta ka ah howlgalka ka hor taga Bur cad badeedka ee Atlanta.
Ku xigeenka Ra’iisul Wasaaraha ayaana la kulmay wafdi ka socda Midowga Yurub iyo Taliyaha Guud ee hawlgalka ATLANTA ee la dagaalanka burcad badeeda Soomaaliya, waxaana kullanka diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirka wada shaqeyn iyo iskaashi ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub, iyo dagaalanka ka dhanka ah Burcad badeeda.
”Wafdi ka socda midowga Yurub oo uu weheliyo Taliyaha Guud ee hawlgalka ATLANTA ee la dagaalanka Budhcad-baddeedka; ayaanu shir kuwada yeelanay Markab taagan Biyaha Badweynta Soomaaliya”.
Guuleed ayaa sheegay in ay kula kulmeen markab ka mid ah kuwa ilaalada Xeebaha “Markabkaasi oo kamid ah Maraakiibta Budhcadda ka ilaaliya biyaha Caalamiga”.
Ugu danbayn waxa uu sheegay Ra\_isul wasaare ku xigeenka dalka in ay kala hadleen Arimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii ay isula shaqayn lahaayeen iyaga howlgalka la dagaalanka Burcada ee ATLANTA.
“Weftigaasi waxaanu kawada hadalay arrimo muhiim ah oo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka wada shaqayneed iyo iskaashi ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub iyo siddii hawlgalada Burcad-baddeedku si wadajir ah looga gaari lahaa hadafka laga leeyahay oo ah siddii maraakiibta dunidu ugu kala gooshi lahayd warwar la’aan iyo nabad-qab” ayuu yidhi
Daawo Ra’isul Wasaare ku xigeenka Dalka oo shir muhiim la qaatay Howlgalka ATLANTA ee micowga yurub added by Staff on May 9, 2018